Disorder Convulsive kungaba esisongela ukuphila
Ngeshwa, Ukudlikizela mkhuba akukhona ngakho ezingavamile. Ikakhulukazi ngokuvamile kwenzeka abantwana. Imbangela kokuquleka kungenzeka ezihlukahlukene izifo, ukuhlukumezeka, ukudakwa, sezinzwa izifo uhlelo.
I ukubonakaliswa yalesi sifo zahlukahlukene kakhulu ku lezi zinto ezilandelayo:
Convulsive syndrome - isimo sokugembula lapho imisipha striated yezimo abhekene encishisiwe. Ngokuvamile kwenzeka yisithuthwane ngokulandelana kwawo, kodwa kungenzeka futhi meningitis, encephalitis, spazmofilii namanye izifo. Okuvela nokuquleka ngokuvamile livela kwezinye iziyaluyalu ku umzimba, okweqile, uhudo olubi noma ukuhlanza. Ngezinye izikhathi zenzeka ukuba umlutha wotshwala, ubuthi acute izidakamizwa psychotropic. Ezinganeni ukuthuthukisa nokuquleka kungenzeka nganoma neurotoxicosis, okuyinto eyenzeka njengoba kwetintfo umkhuhlane, kanye parainfluenza futhi adenovirus izifo. Ngo izinsana, kulesi simo singenzeka kunoma ukukhubazeka azalwa naso we the sezinzwa uhlelo, umoya, zegazi ezibangelwa.
Izifinyezo bungabi ehunyushelwe noma generalized, lapho inqubo kuthinta amaqembu ehlukene kwemisipha. Ngaphezu kwalokho, ukuquleka yilezi:
Clonic noma fast lapho ukusikwa futhi aziphumulele ngokushesha ukulandela nomunye phezu esifushane;
Tonic. Elinesimo isikhathi kancane futhi isikhathi eside imisipha;
Clonic - tonic. Baye elixutshwe.
imvelo yabo kanye nohlobo kuncike inqubo sokugembula oholele okuvela kuyo nesimo sokuquleka noma kuphakamisa okuphindaphindiwe ngokubukeka kwabo. Lapho kukhona ukuphazamiseka convulsive, isiguli sine-iso ezidukayo elahlekelwa uthinte nezwe elingaphandle. Khona-ke kukhona ngokuphonsa ikhanda emuva, clenching ka isiphanga nemihlathi wemikhawulo aphansi zinwetshwe nezandla zakhe eligoqiwe izindololwane futhi izihlakala. A okwehlisa izinga lokushaya kwenhliziyo kanye Izinga lokuphefumula. Ngakho isigaba tonic kwenzeka uma kuxutshwe ifomu nokuquleka. It kuvame ukuthatha isikhathi esifushane kakhulu - umzuzu noma ngaphezudlwana.
ukuquleka Clinical ungase ube isikhathi ehlukene, futhi kwezinye izimo ziholele ekufeni isiguli. Baqala kanye ukudikiza unyakazise imisipha yobuso, bese okuhilelekile zomzimba. Ukuphefumula iba umsindo kakhulu, kukhona Foam ezindebeni zakhe, isikhumba ugodo, tachycardia uyalandelwa.
Lapho uphethwe wesiyaluyalu convulsive, indima ebalulekile udlalwa ngumuntu nemlandvo wetekwelashwa kwakhe okuningiliziwe, futhi izingane ezincane - umlando bokubeletha. Iphinde isetshenziselwe salokhu echoencephalography injongo, ukutadisha fundus, futhi kwezinye izimo i-computer sendawo Yekhanda.
Uma kwakuba khona syndrome convulsive, ukunakekelwa okwengeziwe iwukuhlale esibalulekile imisebenzi:
Ukususwa we isikhwehlela yaleli pheshana zokuphefumula kanye nokunikeza zingenisa umoya opholile;
Ukulawula zenhliziyo umsebenzi zokuphefumula, futhi, uma kunesidingo, ukubabuyisela;
ukukhishwa esifike ngesikhathi futhi efanele isenzo ngokuvamile ukulondoloza ukuphila kwabantu. Ngakho-ke, bonke abantu kufanele bazi imithetho eyisisekelo usizo ezinjalo.
Uma sisheshe Ukudlikizela, ukuphathwa siqukethe ekufezeni ka esegumbini labagula kakhulu. Ngemuva kokunikeza anticonvulsants oluphuthumayo anqunyiwe dehydrating ejenti. Kuze kube manje, kukhona uhlu kunalokho enkulu izidakamizwa ezinjalo, futhi lo dokotela wenza ukubeka ngokuhambisana kobukhulu isimo lesiguli kanye khona comorbidities. Ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi ubhekene ukuqokwa ejenti dehydrating ikakhulukazi kufanele ungajahi.
Ukuvuvukala emva kokuhlinzwa: simtomy, ukwelashwa kanye nokuvimbela
Izeluleko umsoco futhi yokuphila e umzimba syndrome
Amazinga amanzi oLwandle iMediterranean: i-Azure Coast, Turkey, Egypt
Cwaningo bofuzo at ukuhlela sokukhulelwa: incazelo, izici kanye nezincomo
Ukubuyekeza: Boxberry - kwezidingo
Ukwakhiwa ubuchwepheshe "Velox": incazelo, izici kanye nokubuyekeza
German umalugaju Fritz Haarmann: Biography, ubugebengu, izimfanelo
Ehostela. Kuyini, yini izici nezinzuzo impahla
Siyakuhalalisela boss lokuzalwa (owesifazane), futhi indlela yokuqala
City uMsindisi Klepiki ku Ryazan esifundeni. Museum of Architecture Ngokhuni (uMsindisi Klepiki)
Isethelayithi isidlo ngezandla
Blue ihembe - imfashini mkhuba ngesizini edlule. Yini ukugqoka futhi indlela ukuhlanganisa